Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား🛌👀
မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား
Iris က PWM မရှိဘဲရောင်ခြည်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင် pulsations ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ. သငျသညျခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘဲကြာကြာအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါနိုင်ပါလိမ့်မည်.
Iris ကသင်တို့ပတ်လည်အလင်းကိုရန်သင့် Screen Brightness ကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်. မတူညီတဲ့ရလာဒ်ကဒိလိုအလြောကျသင့်ရဲ့ screen ကိုချိန်ညှိပါလိမ့်မယ်. ကွန်ပျူတာများအသုံးပြုခြင်းစာအုပ်ဖတ်နေတူသောခံစားရပါလိမ့်မယ်.
Iris ကတဖြည်းဖြည်းအပြာရောင်အလင်းနေ့ညဉ့်မပြတ်ထိန်းညှိလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ညမှာပိုပြီးက melatonin ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်. သငျသညျအိပျပျြောပိုမြန်လဲပိုမိုနက်ရှိုင်းအိပ်ပါလိမ့်မယ်.
automatic, လက်စွဲစာအုပ်, ဆိုင်းငံ့မှု
ကျန်းမာရေး, အိပ်, စာဖတ်ခြင်း, programming, Biohacker, နေကာမျက်မှန်, မှောငျမိုကျသော, movie,, overlay
သငျသညျအပြာရောင်အလင်းနှင့် PWM လျှော့ချရေးတို့အတွက်ယေဘုယျရလာဒ်ကဒိပေးသည်
အဆိုပါ Mode ကိုများနှင့်အမျိုးအစား menu ကနေပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး
လက်စွဲ mode ကိုအတူနေ့စဉ်အတွင်းမျက်လုံးမျိုးကိုလျော့ချ
စာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင်မှသင့် Monitor Transform
Programming နှင့်အတူအရာအားလုံးအပေါ်က Black ဆောင်ပုဒ် Get
Biohacker နှင့်အတူက melatonin Secret Supercharge
Overlay ကိုအတူက USB မော်နီတာအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်သင်၏မျက်စိကာကွယ်ပါ
docking station ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်မော်နီတာအပေါ် Iris ကဖွင့်ဖို့အဆင့်မြင့် API ကိုသုံးပါ
အပြာရောင်အလင်းလျှော့ချရေး Customize နှင့်သင့် screen ကိုပိုပြီးနီအောင်, လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်
ပိုကောင်းသငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိအလင်းမှအလင်းတောက်ပမှုလျှော့ချရေးနှင့်ပွဲစဉ် Screen Brightness ကို Customize
နေ့နှင့်ည mode ကိုများအတွက် Set ထုံးစံကြိမ်
နေ့နှင့်ည mode ကိုတဖြည်းဖြည်းအကူးအပြောင်းကြာချိန် Customize
အမှောင် mode ကိုအချင်းဝက်နဲ့မျက်နှာပြင် illumination Customize
သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကြိမ် Customize, အလင်း, အရောင်အဝါများနှင့် 3rd အလိုအလျောက်အကူးအပြောင်း
Iris ကအပေါ်ကို Disable 1 ၏2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမော်နီတာ
font ကိုချောမွေ့သည်အခြားမျက်စိ strain ဖောက rendering နည်းစနစ်ကို Disable
အခြိနျမှနျမှဝေးလံသောအရာဝတ္ထုကိုကြည့်ဖို့သတိပေးခြိုးဖကျြ Iris ကကိုသုံးပါ
အချို့သော program ကို run နေသို့မဟုတ်အာရုံပေါ်ကြသောအခါအရောင်အပြောင်းအလဲများနှင့် Timer ကို Disable
သင့် Camera Brightness ကိုနှင့် Blink ထောက်လှမ်းဘို့သုံးပါ
Enable နှင့်စိတ်ကြိုက် system ကို-ကျယ်ပြန့် Shortcuts ပိုမြန် Iris ကသုံးစွဲဖို့နှင့် Settings menu ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ
Photoshop ကိုနဲ့တူလာသောအခါအစီအစဉ်များကိုအလိုအလျောက် Iris က Pause, 3DS မက်စ်, Blender သို့မဟုတ်မာယာအတိအကျအရောင်များရှိသည်ဖို့အာရုံပေါ်မှာ
သငျသညျမျက်နှာပြင်အပြည့်အပေါ် YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်စဉ် Iris က Pause
ကမောက် pausers နှင့်အတူ DirectX ကိုဂိမ်းထဲမှာပျောက်ကွယ်ခြင်းမရှိဘဲလိမ္မော်ရောင် mouse ကိုသုံးပါ
အလိုအလျောက်တောက်ပ Enable နှင့်အလိုအလျောက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအလင်းရန်သင့် Screen Brightness ကိုကိုက်ညီရန်သင့်ကင်မရာကိုသုံးပါ
သင်မကြာခဏအသုံးပြုနိုင်သည်ကွဲပြားခြားနားသော menus တွေပြရန်သို့မဟုတ်ဝှက်. အင်္ဂါရပ်များစာမျက်နှာမှ Iris က Customize
အဆိုပါ menus တွေ၏ဘာသာစကားကိုပြောင်းနည်း. Iris ကသင့်ရဲ့ဇာတိဘာသာစကားကိုအတွက်ဘာသာပြန်ထားသောသုံးပါ
Customize နေ့, ညဥ့်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းအပြာရောင်အလင်းထဲက0သို့ 100%
အရောင်များကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါနဲ့အရာရာအပေါ်အစာရှောင်ခြင်းက Black ဆောင်ပုဒ်ကိုသုံးပါ
PWM မရှိဘဲသင်၏ Brightness ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်သင့်မော်နီတာ၏အရောင်အဝါအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်
Customize နေ့, ညဥ့်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းအလင်းတောက်ပမှုကနေ0သို့ 150%
မျက်စိ strain လျှော့ချရန် Iris ကတုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့ရောင်ခြည်သုံးပါ
လက်စွဲ Brightness ကိုအတူတပြင်လုံးကိုနေ့ညဉ့်မပြတ်ကာလအတွင်းအနိမ့်အလင်းတောက်ပမှု
သငျသညျ, Proxy နောက်ကွယ်မှလျှင်သင့်ရဲ့ထုံးစံလတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်ကိုတင်ထားရန်လက်စွဲစာအုပ်တည်နေရာကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့နာရီအစားတည်နေရာနဲ့ set ထုံးစံညဥ့်က start နှင့်အဆုံးအဆကိုသုံးပါ
Iris ကကွဲပြားခြားနားသောကြိုတင်ကြိမ်အကြား transits ဘယ်လိုသိသိသာသာ Customize နှင့်သင့်အကူးအပြောင်းဖြစ်သင့်ပုံကိုချောမွေ့သတ်မှတ်ထား
Lightness menu ထဲကမျက်နှာပြင်၏ထောင့်ညိုမည်းလာနေသည်အားဖြင့်အရောင်အဝါသို့မဟုတ်အပြာရောင်အလင်းပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲမျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုကိုလျှော့ချ
နှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်ပင်နိမ့်အပြာရောင်အလင်းနှင့်တောက်ပမှုများအတွက် 3rd အကူးအပြောင်းအချိန်ကိုသုံးပါ
အိပ်စက်ခြင်းအလင်းနှင့် Brightness ကို Customize နှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်ကိုသတ်မှတ်နှင့်သင့် 3rd အကူးအပြောင်းအချိန်နိုး
တစ်ဦးချင်းစီမော်နီတာများကိုစီမံကွပ်ကဲ. သင့်ရဲ့ဖန်သားပြင်၏တဦးတည်းအပေါ် Iris က Enable သို့မဟုတ် disable
ကွဲပြားခြားနားသော optimized မျက်နှာပြင်ပြောင်းပြန်ကိုသုံးပါ.
ထိန်းချုပ်ရေးအရောင် Scheme နှင့်အတူအပြာရောင်အလင်းလျှော့ချရေးကိုဘယ်လိုတန်ခိုးကြီး
အဆိုပါအစိမ်းရောင်အရောင် Leave နှင့် Groot နှင့်အတူသာအပြာရောင်အလင်းကိုလျှော့ချ
အရောင်ကုထုံးတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဦးဆောင်အရောင်များနှင့်စမ်းသပ်မှုကို Select လုပ်ပါ
စာလုံးချောမွေ့နှင့်မျက်လုံး strain ဖြစ်ပေါ်စေသည့်စာလုံးပိုမိုကောင်းမွန်ရေး၏အခြားအမျိုးအစားများကို Disable
စိတ်ကြိုက်သတိပေးနှင့် timer ကိုချိုး. ဝေးလံသောအရာဝတ္ထုကိုကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးပါ
ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ် timer နဲ့တူ Pomodoro ကိုသုံးပါ
သငျသညျကွာသင့် Monitor ကနေနေစဉ်ပိုပြီးလှပဖြစ်ကျန်မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
ကြည့်ရှုရန်သင့် mouse ကို cursor ကနေအပြာရောင်အလင်းကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ကတောက်ပနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါ
သငျသညျကွာသင့်ရဲ့ PC မှာထံမှနေစဉ်အလိုအလျောက် timer နေရာမှာခေတ္တရပ်တန့်ပြီး
DisplayLink အပေါ် Iris က Enable အဆင့်မြင့်အရောင် API ဖြင့်ကို USB ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်မော်နီတာသို့မဟုတ်မော်နီတာချိတ်ဆက်
စမတ်ရောင်ခြည်သုံးပါ. မျက်နှာပြင်အကြောင်းအရာများကိုအပေါ်အခြေခံပြီးမျက်နှာပြင်တောက်ပသို့မဟုတ်မှောင်မိုက် Make
Blink ထောက်လှမ်း Enable. သငျသညျမျက်တောင်ခတ်ဘယ်လောက်မကြာခဏကြည့်ရှုပါ
Overlay ကိုအတူအသုံးပြုခြင်းအပိုင်းမျက်နှာပြင်အပြာရောင်အလင်းနှင့် PWM လျှော့ချရေး
hidden features တွေအားလုံးသင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးလုပ်
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမော်နီတာကနေပိုလျှံအပြာရောင်အလင်းသင့်ရဲ့ဇီဝကျန်းမာရေးကိုအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်မှုနိုင်ပါတယ်. ကံကောင်းထောက်မစွာ Iris က software ကိုယင်း၏ဆန်းသစ်ချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့်နီးပါးအားလုံးအန္တရာယ်များ၏ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်. ငါငါ့အလိုရှိသမျှကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပြုပါရန်သင့်အားအားပေး. ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ရဲ့အပြာရောင်အလင်းထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်ဖို့စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်.
တည်ထောင်သူ Mercola.Com, ကမ္ဘာ့ဖလားအများဆုံးသွားရောက်ခဲ့သည့်သဘာဝကျန်းမာရေး site ကို
ငါအပြာအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်တည်ရှိခြင်းနှင့်ဘာမျှမပင်နီးကပ် Iris ကမှကြွလာသည်ဟုမျက်စိကျန်းမာရေးဆော့ဖ်ဝဲရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်းအပိုင်းအစကြိုးစားခဲ့ကြ.
တည်ထောင်သူ BenGreenfieldFitness.com. New York Times ကိုအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်စာရေးဆရာ. ယင်းထိပ်တန်းတစ်ခုမှာ 100 ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးခုနှစ်တွင်သြဇာအရှိဆုံးလူ
ငါငါ့အလိုရှိသမျှကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင် Iris ကသုံးပါကကျိန်းသေတဲ့ခြားနားချက်စေသည်. ငါတကယ်ညဉျ့အခြိနျ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်ပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားမိခြင်းနှင့်ကိုယ့်ပိုကောင်းတဲ့အိပ်. ငါသည်အမြင့်မားသည်သူ၏အမြင်အာရုံဂရုစိုကျတဲ့သူလူတိုင်း Iris ကအကြံပြု.
ဒေါက်တာ. Svetlin Nakov
co-founder SoftUni. တောင်ပိုင်းအဘိဓါန် Eastern ဥရောပမှာအကြီးဆုံးအိုင်တီသင်တန်းကျောင်း. ငါ့ကို Programmer ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုး၏တစ်ခုမှာ :)
ကွန်ပျူတာမျက်စိ strain နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ, Iris ကအခြားမည်သည့်အပြာအလင်း filter ကို app ကိုထက်အများကြီးပိုကမ်းလှမ်း.
Uros Bole အဘိဓါန်
Computer ကိုမျက်စိ strain ဝေဒနာသည်, တည်ထောင်သူ GLARminŸ - အဆိုပါ PC ကိုမျက်စိနှစ်သိမ့်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်.
Iris ကကြှနျတေျာ့ MacBook မျက်နှာပြင်တောက်ပခြင်းနှင့်အရောင်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ software ကိုငါ့သွားလာရင်းဖြစ်ပါသည်. ငါကနဲ့တူခံစားမိသောအခါငါကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အပြာရောင်အလင်းပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းကိုချစ်သေးအဆင့်မြင့် options များငါ့ကို ပို. ပင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်. ငါသည်သူတို့၏မျက်စိကိုကာကွယ်ရန်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုတဲ့သူကိုလူတိုင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ခုန်နုန်း Iris ကအကြံပြု.
တည်ထောင်သူ BiohackersLab.com - သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာရှာဖွေတွေ့ရှိ
ငါ Iris ကချစ်ပြီးအစဉ်အမြဲငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run နေကြပါပြီ. ဒါဟာရယ်မိုက်မျက်မှန်ထက်အပြာရောင်အလင်းပိုကောင်းလုပ်ကွက်, ငါ့မျက်နှာပြင် display ကိုကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုပေးသည်နှင့်လည်းတုန်ခါမှုတွေနှုန်းမှာကဲ့သို့အငယျဆုံးသောလူသိများကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အမှာစကားပြောကြား, တောက်ပပြီးပို.
co-founder အဆိုပါ သာ. ကောင်း၏လူ့စီမံကိန်း. အဆိုပါအမျိုးသားများရဲ့ကနျြးမာရေးကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်
အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီအထူးသဖြင့်ညဦးယံ၌ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူတိုင်းခြားနားချက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်. ဒီ app စာသားသည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်. ငါနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကျနော်တို့ကိုအသုံးကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင် app ကိုရှိ. အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် - ကို set up ဖို့တစ်မိနစ်ကြာ.
ငါ Iris ကရှာတွေ့နိုင်ပါခဲ့တာကယ့်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်. ဒါဟာငါ့အခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အအိပ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း. ငါ့ကိုကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်အပြာပမာဏကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပေးသနားတဲ့ဆော့ဖျဝဲရှိသည်ဖို့အတှကျတကယ့်အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့အိုင်တီစီမံကိန်း Manager ကိုငါကို PC နှင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်တစ်နေ့တာအတွင်းအချိန်အများကြီးဖြုန်းအဖြစ်! Iris ကကြောင်းနှင့်မသာမ. ဒါဟာသင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော ယူ. မျက်စိ strain ကိုလျော့ချကူညီပေးသည်. ဒါဟာအကြီးအ software ကိုဖွင့်နဲ့ကျွန်မတစ်နှစ်ကျော်ကထိုသို့သုံးပြီးခဲ့တာ. ငါငါ့အလိုရှိသမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအကြံပြုပါတယ်, သူတို့အများစုကအားလုံးကိုအချိန်ကိုအသုံးပြုနေသည်! ဒီကြောက်မက်ဘွယ် software ကိုအောင်ဘို့ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်ကျေးဇူးတင်စကားဒံယလေက.
SAP Ariba မှာပေါင်းစည်းရေးစီမံကိန်းမန်နေဂျာ
ဒါဟာအလင်းအကြောင်းကိုအားလုံးင်! ထက်ပိုမိုသုံးစွဲ 10 ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌နာရီတစ်ရက်တစ်ချိန်ကငါ့မျက်စိတစ်ရုန်းကန်ခဲ့, ဒါပေမယ့် Iris ကတလျှောက်သို့ရောက်လာသောကတည်းက, မျက်စိအများကြီးပိုကောင်းနှင့်စိတ်သက်သာရာရတယ်. နှောင်းပိုင်းတွင်နာရီကို PC အလုပ်တော့ဘူးငါ့အအိပ်စက်ခြင်းကိုထိခိုက်ပါဘူး. ငါရိုးသားစွာအခုဘဲငါဘဝကိုစိတ်ကူးမနိုင်. app ကို၏မူလအစနောက်ကွယ်မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းလည်းရှိပါတယ်, ငါ့ထံသို့အတော်လေးဖှယျသော. ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖြေရှင်းချက်အတူတက်လာမယ့်အဘို့သင်သည်ဒံယေလ Georgiev ကျေးဇူးတင်ပါသည်! အလွန့်အလွန်အသုံးဝင်သောနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်! ဒါက Iris ကဖွင့်.
Iris ကကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌အချိန်အများကြီးသုံးစွဲတဲ့သူတိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါ. ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာသလားနှင့်ခေါင်းကိုက်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရနှင့်မျက်စိ strain တားဆီး.
တည်ထောင်သူ FortuneLords.com - လာမယ့်အဆင့်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်းတစ်ရာအရပျ.
ငါမျိုးစုံမော်နီတာနှင့်အတူကွန်ပျူတာများများ၏ရှေ့မှောက်၌ငါ့အချိန်အများစုသုံးစွဲသကဲ့သို့ငါမျက်စိ strain အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိသည်ဖို့အသုံးပြု, အလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဖြစ်စေ. ငါ Iris ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်စတင်. Iris ကသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, သငျသညျအကွောငျးကိုတစ်ပါတ်အတွင်းလျှော့ချမျက်စိ strain နှင့်အိပ်စက်ခြင်းသံသရာပုံမှန်ခံစားရနိုင်ပါတယ် (ငါ့ကိစ္စမှာတော့). ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဒံယလေသတက်အောင်ထားပါ!
Iris က၏ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ဦးက. သူကတကယ်ငါ့ကိုဒီဓာတ်ပုံကိုသုံးစွဲဖို့လိုခငျြ
Iris ကဖန်တီးကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒံယလေက! ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ငါ့အလုပ်လုပ် PC ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျသုံးပြီးငါကစူပါအသုံးဝင်သည်. အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုကျေးဇူးတင်နေကြသည်! ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုယုံကြည်ကြဘူးသူကိုသင်တို့ရှိသမျှအဘို့အ, သင်ကကြိုးစားခဲ့လျှင်သင်ကမပါဘဲနောက်တဖန်တစ်မော်နီတာကိုကြည့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်!
Sony ကမိုဘိုင်းမှာ Market ကဖွံ့ဖြိုးရေး Manager ကို
ငါတစ်ရက်က developer ရယ်နဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအကြောင်း Quora ဆွေးနွေးချက်ဖတ်ရှုပြီးနောက် Iris ကစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်. အဲဒီစကား Reading ငါ့ကိုဒီဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကြော့နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားအပိုင်းအစဖြစ်တယ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အမှန်ပင်ထိုသို့ခံစားရလုပ်! ငါကဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ချက်ချင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ကထား, ငါ၏အအကျိုးရှိဖို့! ယခုတွင်ငါသည်လျော့နည်းပင်ပန်းခံစားရနှင့်အလုပ် / ကြွင်းသောအရာ timer နေရာမှာဿုံပိုကောင်းအချိန်ဇယားအလုပ်ငါ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ.
Cosimo က D'Amicis
ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ Iris ကဝယ်သူကိုပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုသူတို့အနီမပေးဖြစ်ကြပြီးငါတောင်ငါ့အမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ရန်မေ့လျော့နေတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်အများအပြားနာရီအကြာတွင်ဒီတော့ပင်ပန်းမဟုတ်. အံ့သြစရာကုန်ပစ္စည်း! ငါတကယ် Iris ကငါ့မျက်စိနှင့်အတူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတန်ဖိုးထား. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Iris က! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒံယလေသ🙂
ငါအစီအစဉ်များကိုအများကြီးစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ငါကရိုးရှင်းပြီးကြော့ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက် Iris ကငါ့အတပ်မက်လိုချင်သောအ option ကိုခဲ့သည်. ဒါဟာယခုစိတ်ကြိုက်များအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ပရိုဂရမ်းမင်းများအတွက်မျက်စိအနားယူပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်တစ်ချိုးယူမသာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. စံတော်ချိန်အရသိရသည်အရောင်အပူချိန်ကိုသုံးပြီးစစ်ဆေးမှုများ၌ငါ့အိပ်စက်ခြင်းသံသရာစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်, ခန္ဓာကိုယ်အသီးအနှံက melatonin ပါစေနှင့်ရောဂါများအားလုံးမျိုးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ညဥ့်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုကြောင်းငါကဲ့သို့သောလူများအတွက်.
အကြီးတန်း Programmer (ဘရာဇီး)
ငါဒီ app ကိုချစ်!
DB Schenker မှာအကြီးတန်းစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Iris ကထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာမျှမရှိင်, အမှန်တကယ်. ငါကကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်သူသည်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေင်ထင်. software ကိုဒီအပိုင်းအစအမှန်တကယ်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်!
ကိုယ်ခံပညာချန်ပီယံပတ္တမြား Programmer လှည့်
အဖြစ်မကြာမီငါ software ကိုစတင်အဖြစ်, အပြောင်းအလဲကိုချက်ချင်းခံစားခဲ့ရခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ငါ၏အမှုကာလအတွင်းငါ့မျက်မှောက်၌တင်းမာမှုနိမ့်ဆုံးကျဆင်းသွား. ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရာကိုအဘို့အကျေးဇူးတင်မိပါတယ်. သင်တို့၏ကောင်းသောအလုပ်နှင့်အတူပေါ်သိမ်းဆည်းထားပါ :)
ငါငါ့အလိုရှိသမျှကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Iris ကသုံးပြီးနှင့်သင့်အလုပ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်တယ်! ဆက်လုပ်ပါ.
Verder မှာ Manager ကိုသိပ္ပံထုတ်ကုန်
ဒါကြောင့် Linux တို့အတွက်လုပ်မယ့်ပုံကိုရိုးရှင်း Love. ဂရိတ်ထုတ်ကုန်. ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်အောင်ထားပါ!
ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အအလုပ်၏အင်တာနက်ပေါ်မှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ကိုသုံးပါ. ငါငါ့အလိုရှိသမျှပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ Iris ကသုံးပြီးငါနှင့်ငါကအလွန်ဝမ်းသာတယ်. အများဆုံးအိုင်တီကလူငါမျက်စိပြဿနာများရှိသည်နှင့် Iris ကအများကြီးကူညီပေးသည်လိုပဲ. ငါကအကြံပြု!
CEO နဲ့တည်ထောင်သူ Pana မီဒီယာ
ငါ Iris ကသုံးစွဲဖို့စတင်တဲ့အခါမှာငါကကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ငါ့မျက်စိအဘို့အမှုအရာတို့ကိုအများကြီးပိုလွယ်လုပ်လည်ပတ်သောဘယ်လိုအံ့အားသင့်ခဲ့. ငါနောက်ဆုံးတော့ eyestrain မပါဘဲညဥ့်အချိန်တွင်ငါ၏အ devices တွေကိုသုံးပြီးခံစားနိုငျ.
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားကနေဓာတ်ပုံ Editor ကို
ငါနှောင်းပိုင်းတွင်ညဦးတိုင်အောင်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်. ငါသည်ငါ့မျက်စိပေါ်မှာအပြာရောင်အလင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားခဲ့ရ. ငါ Iris ကစတင်သုံးစွဲလိုက်တဲ့အခါ, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ငါသည်ငါ့မျက်စိပေါ်မှာမဆိုအန္တရာယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရဘူးငါအပြီးအပိုင် Iris ကသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ. ဒီလိုတစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီးမျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကျေးဇူးတင်စကားဒံယလေသ Georgiev များအတွက် Iris ကသာအကြံပြု.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေ Web Developer
ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်ပါတ်မှုအတွက် Iris ကသုံးပြီးနှင့်တကယ်ပျော်မွေ့ကြပြီ. အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုအများကြီးပိုစိတ်အေးလက်အေးကျန်းမာရေးကြိုတင်အပေါ်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ရန်အသုံးပြုအဖြစ်သူတို့မရှိတော့အရေးအသား၏နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ရှို့သို့မဟုတ်ပိုက်ကွန် surfing. ငါခဏတစ်အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အလင်းစာသားကိုရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့မျက်နှာပြင်အရောင်များကိုနောက်ပြန်ဆုတ်များအတွက် Programming ကြိုတင်ကိုချစ်, နှင့်စာဖတ်ခြင်းကြိုတင်အဆိုပါတုန်ခါမှုတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အဖြူအမည်းငါ့မျက်နှာပြင်နှိမ့်ချအေးဆေးဘို့သည်ကြီး. အလွန်အားမစိုက်ရ. ထိုကဲ့သို့သောသာယာသောအောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အသုံးဝင်သောပရိုဂရမျ. ငါ့မျက်စိလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မျက်စိဆရာဝန်အဖြစ်, ငါကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်မျက်စိ strain နှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားကြောင်းအများအပြားလူနာကြည့်ရှု. အဆိုပါ Iris ကအစီအစဉ်ကိုဤသူတို့ကိုငါ့အားအလူနာကူညီရန်အဘို့ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ခဲ့. ယနေ့နည်းပညာကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းစွာနှင့်အပန်းဖြေအဖြစ်အလုပ်အတွက်မျက်နှာပြင်အချိန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုလိုအပ်ပါတယ်. မဟုတ်မှသာ Iris က software ကိုတနေ့လုံးမျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌သူသည်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးကကူညီပေ, ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်ဆက်နွယ်သောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမသန်စွမ်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်ခဲ့, ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း, နှင့်လေဖြတ်ခြင်းလူနာများအား. အပြာရောင်အလင်းပမာဏကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းအများအပြားလူနာနောက်ကျောကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု. ရသူတို့ကို enable လုပ်ဖို့အပြာအလင်း၏ပမာဏအတိအကျသတ်မှတ်ထားဖို့ခှငျ့ပွုခဲ့. ဒါကတစ်ဦးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အပြီးအလုပ်မလုပ်ပြန်မယ့်အကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်.
ဒေါက်တာ. ချဒ် Edmond
Iris ကရိုးရိုးဂိမ်း changer ဖြစ်ပါသည်. ငါ၏အထက်သို့များအတွက်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌နထေိုငျတဲ့ရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာအဖြစ် 14 တစ်နေ့လျှင်နာရီ, နှင့် Iris ကယခုငါကိုအသုံးတိုင်းစက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်. ဒါဟာအကြီးအကျယ်မျက်စိပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းသည် Modes အသုံးပြု. ညမှာဆင်းလေငါ့စွမ်းရည်အပေါ်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်. ငါကမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရပါဘူး.
ထက်ပိုမိုသုံးစွဲသူတစ်ဦးအဖြစ် 16 မျိုးစုံပြသမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌နာရီ, ငါ Iris ကအလွန်ကျန်းမာသုံးပြီးရှာရမလဲ. သူတို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုငါаrtificialမျက်ရည်သုံးပြီးရပ်တန့်အဖြစ်ငါ့မျက်စိပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြသည်မဟုတ်. ကိုယ့်တော့ဘူးသူတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး.
Videolux ဦးပိုင်မှာ Awesome ကိုမိတျဆှေမြားနှငျ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားလက်ထောက်
ဒံယလေသညျမိမိ Iris ကဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အံ့သြဖွယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်. သူကသို့ဤမျှလောက်အလုပ်ထားနှငျ့သငျရလဒ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်. အဆိုပါ interface ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်. Iris ကအပြာရောင်အလင်းဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အနှောင်းပိုင်းအထိတည်းခို၏ကငျြ့ဆိုးကိုချိုးဖျက်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်. ငါသည်ငါ့ laptop ကိုပေါ်နှင့်ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာ Iris ကကိုသုံးပါ. ကြီးစွာသောအလုပ်ဒံယလေသတက်အောင်ထားပါ!
Orbisius နှင့် qSandbox တည်ထောင်သူ
ငါ၏အ Podcast တခုကိုမှ Daniely ဖိတ်ခေါ်ခင်မှာ, ငါသာ Facebook ပေါ်မှာ Iris ကအကြောင်းကိုဖတ်ရှုပြီး. ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကြားပြီးလျှင်, ကျွန်မချက်ချင်းကြောင့်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ကြှနျတေျာ့ကိုပုံမှန်အလုပ်ငါ့ကိုဖြုန်းခဲ့ 9-10 တစ်ဦးမော်နီတာရှေ့မှာနာရီပေါင်းတစ်ရက် (သို့မဟုတ်နှစ်ဦး), ဒါကြောင့်ငါ software ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့သေချာခဲ့သည်. တစ်ဦးအမြန်စမ်းသပ်မှုများအတွက် Iris က mini ကို install လုပ်ပြီးနောက်, ကျွန်မချက်ချင်းနှစ်ရက်အတွင်းကွာခြားချက်ကိုမြင်လျှင်အစဉ်အမြဲကတည်းကအသုံးပြုရန်. ထိုကွောငျ့, ငါအဆက်မပြတ် App ကိုနှင့် Daniely ရဲ့ငါ့မိသားစုမှကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အကြံပေးအကြံပြု, မိတ်ဆွေများက, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, နှင့်နောက်လိုက်များ. ကြီးမားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်မှုကြီးအောင်!
အဆိုပါလူစွမ်းကောင်း podcast မှာတည်ထောင်သူနှင့်အိမ်ရှင်
အခုကိုကျော်တစ်နှစ် Iris ကသုံးပြီးခဲ့တာကြောင့်တစ်ဦးပြည့်စုံဂိမ်း changer ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ podcasting နှင့်အွန်လိုင်းမှကျန်းမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေ, ငါအချိန်ပြစရာလူစိမ်းရယ်နဲ့ Iris ကငါ့ကိုထိုနေ့၏အဆုံးနှင့်ဒီထက်ပင်ပန်းမှာပိုလတ်ဆတ်မျက်စိရှိကူညီပေးသည်, ငါ့ကိုညနေခင်းထဲမှာရှိသမျှကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေအပြာရောင်အလင်းစုပ်ယူစရာမလိုဘဲပိုမိုကောင်းမွန်အိပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့. ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များနှင့်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဘို့သင့်ကို Iris ကကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Iris ကယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထက်အများကြီးပိုပါတယ်. Iris ကသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. Iris ကစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးနှင့်ဖွဲ့ခဲ့သည်. Iris က၏ချမှတ်ခြင်းမှတဆင့်, ဒံယလေကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစာရေးတစ်ဦးစီမံကိန်းအတွက်ထဲသို့သွင်းထားသောအခါကြောင်းသက်သေပြ, ကလေးစားခံရဖို့တစျခုဖွစျလာသ. စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိကသူ၏အသိတစ်ခုလုံးအဖြစ်လေးစားပါတယ်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်. ငါနှစျခုနှစျကျြောအဘို့အကြှနျုပျ၏ PC များအပေါငျးတို့သအပေါ် Iris ကကိုသုံးပါ. ငါအပြည့်အဝကဤအံ့သြဖွယ်စီမံကိန်းကိုထောက်ခံရန်နှင့်သူ၏အောင်မြင်မှုများထောက်ခံနှင့်မြှင့်တင်ရန်, Iris ကငါ့အနစ်ပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးပေါ်မှာအင်္ဂါရပ်အဖြစ်ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးရပ်အိုင်ကွန်ဖြစ်လာသည်. ယခုနှင့်အနာဂတ်နှစ်အတွင်းကထွက် Check ကြောင့်သင်တို့အဘို့အရာဖြစ်စေမည်ခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်!
သငျသညျအရလိမ့်မယ် 1 Iris ကထည့်သွင်းသောမိတျဆှေအဘို့ပိုပြီးတစ်လအခမဲ့အချိန်
အတူက Share2ကလစ်
ဖိတ်ကြားခဲ့မိတျဆှမြေားရ 1 တစ်လအခမဲ့အချိန်
1 အချိန်ကိုဝယ်ယူ, အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခ
အဘို့တစ်သက်တာလိုင်စင် 1 စက်ယန္တရား. အပ်ဒိတ်များမပါဝင်
ဗိုလ်မှူး Iris က updates များကိုတပ်ဆင်ထား